ချစ်သူများနေ့ဆိုတာကတော့ သိပ်ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့နေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့နေ့မှာဆိုရင်တော့ ဆင်တူဝတ် ချစ်သူတွေကို နေရာတိုင်းမှာ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းလောက် အောင်လည်း တွေ့မြင်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူရှိသူတိုင်း ချစ်သူများနေ့ကို စောင့်မျှော်နေမယ်ဆိုတာလည်း အသေအချာပါပဲ။
ပြည်သူချစ် Beauty Blogger တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နေခြည်ဦး(Beauty by naychi) ကတော့ သူမရဲ့ page မှာ ချစ်သူများနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန် ပြုလုပ်ရန်တွေ ကိုအခုလိုပဲ ရေးသားဝေမျှ ထားပါတယ်။
💗💗 BEAUTYBYNAYCHI: What You Should Do On Valentine’s Day 💗💗
(လာမယ့် ချစ်သူများနေ့အတွက် ပြင်ဆင်ပြီးပြီလား ??) 💏
အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ဘုရားသွား၊ coffee သောက်၊ ညစာထွက်စားတာမျိုးလေးတွေ လုပ်သင့်တာဆိုတော့ post လေးကို အဆုံးထိ ဖတ်ကြည့်နော်) ♥️♥️♥️
Beautybynaychi Page ကနေ
ချစ်ရသူတွေအတွက် အချစ်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ နေ့ရက်တိုင်းက
တော့ valentine's day ပါဘဲ💗💗 သို့ပေမဲ့လည်း နေခြည်ကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒီ Valentine's day - February 14 ကို နှစ်တိုင်းရင်ခုန်ဆဲပါ။
Chillies တို့လည်း ချစ်သူများနေ့မှာ အလုပ်တွေများလို့
🙏 ဘုရားသွား မနက်စာစားတာလေးဖြစ်ဖြစ်၊
☕️ Coffee ဆိုင်မှာထိုင်စကားပြောတာလေးဖြစ်ဖြစ်၊
🎞 Movie date လေးဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊
အမှတ်တရဖြစ်စေမဲ့ date လေးကိုတော့
ဖန်တီးစေချင်တာပေါ့လေ။ ဒါကြောင့် နေခြည်က ဒီ
ကြာသပတေးနေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ချစ်သူများနေ့ကို
ပြင်ဆင်ရမှာ အချိန်မပေးနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ chillies တွေ ဒီpost လေးဖတ်ကြည့်ပြီး လွယ်လွယ်ကူကူပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အမှတ်တရဖြစ်ဖွယ် ဖြတ်သန်းလို့ရအောင် V-Day မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ blog လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
No - 1 OOTD 💃🏻
ပထမဆုံးအနေနဲ့ စဉ်းစားစေချင်တာက fashion ပေါ့ 👕👚
ဒီနေ့မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်စေမှာမျိုးကိုဘဲ နေခြည် ရွေးစေချင်တယ်။ ဒီနေ့ရဲ့ နေခြည့် fashion လိုမျိုးပေါ့ 👗 blouse လေးနဲ့ စကတ်လေးဘဲဖြစ်ဖြစ် ဂါဝန်လေးဘဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဆန်ဆန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံလေးက V-Day အတွက်အလိုက်ဖက်ဆုံးပါ။ ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ Couple shirtလေး တွေ ဝတ်တာကလည်း ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာပါဘဲ 💛 နေခြည်ကတော့ ကြိုက်ပါတယ် ကြည့်ရတာကြည်နူးရတယ်လေ။ တစ်ခုဘဲ special day ဆိုပြီး ကျဉ်းကျဉ်းကျပ်ကျပ် ပျိုးပျိုးပြက်ပြက်တွေဝတ်ရင် ကိုယ်ဘဲ အနေကျပ်ပြီး တစ်နေကုန် အဆင်မပြေဖြစ်နေမယ်။ ဖိနပ်ကိုလည်း တစ်နေကုန် လျှောက်လည်မယ်ဆို high heels ထပ်နေခြည်ဝတ်ထားသလို ballet pumps လေးတွေ ဒေါက်ထူထူလေးတွေက ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။ 👠
အဝတ်အစားပြီးရင်တော့ မပါမဖြစ်က ရေမွှေး ဘဲနော်။
လှလှပပဝတ်စားပြီး ချွေးနံ့တွေထွက်နေတာမျိုးဆို မဖြစ်သေးဘူးလေ 🤭 ။ ဒါကြောင့်ရေမွှေးမစွတ်တဲ့သူတောင် ဒီနေ့မှာ ရေမွှေးလေးစွတ်ဖို့ သတိပေးလိုက်မယ်နော်။
No -2Make-up 💁🏻‍♀️
Makeup ထက် နေခြည်တို့ရဲ့ skin လေးကြည်နေဖို့ ညထဲက Mask လေးကပ်ထားမယ်။ မိတ်ကပ်မလိမ်းခင် sunscreen သုံးမယ်။ မိတ်ကပ်ကိုလည်း သဘာဝအဆန်ဆုံးလေးလိမ်းထားမယ်ဆို အဆင်ပြေပါပြီနော်။
အဲ့နေ့မှာ ကိုယ်ဆိုးထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီလေးရယ် two way လေးရယ်လဲ အိတ်ထဲယူသွားဖို့ မမေ့နဲ့ဦးပေါ့။
No -3Hair style 💇🏻‍♀️
နေခြည် အကြံပေးချင်တာက ဒီနေ့မှာ ခေါင်းလေးကို စင်အောင်လျှော်ပြီးဆံပင်ကိုလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးနဲ့ ကိုယ့်ရှိရင်းအတိုင်းလေးပြင်သွားတာနဲ့ လုံလောက်ပါပြီ။ အဓိကက ဆံနွယ်လေးတွေ လေမှာ လွင့်ရေရင် မွှေးပျံ့ပြီး သန့်ရှင်းနေဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
No -4Dating 💑
နေခြည်တို့ V-day ကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့။ နေခြည်ကတော့ No4အချက်ကို ကောင်လေးတွေကိုအထိကထားပီး ဖတ်စေချင်တယ်
📣 ကဲ ကိုယ့်ကောင်လေးကို mention သွားလိုက်ပါ 📣 NO-4 အချက်ကိုဘဲ ကွက်ဖတ်လည်းရတယ်လို့
နေခြည်ကတော့ relationship မှာ ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ကောင်လေးတွေကို ပိုကြိုက်တယ်
ငါတို့တွေ့မယ် ၊ ဘယ်သွားမယ် ၊ ဘာလုပ်မယ်လို့ ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ကောင်လေးမျိုးဆို အမှတ်ပြည့် 💯
V-day မှာ date ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ တစ်နေ့လုံးကြီး အတူရှိနေစရာတော့မလိုဘူးလေ။
အချိန်အပိုင်းခြားလေးတခုလောက် date ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကို လုံလောက်တယ်လေနော်။
ဒီ V-day မှာမှ စဒိတ်မှာတို့ ၊ ချစ်သူဖြစ်တာ ရက်ပိုင်းလောက်ဘဲ တွေ့ဖြစ်သေးတာမျိုးဆိုရင် 🥰🥰🥰
🙏🏻 မနက်စောစောဘုရားသွားမယ် 🙏🏻
နေခြည်က ရန်ကုန်သူဆိုတော့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ dating နေရာလေးတွေဘဲ ညွှန်းပေးမယ်နော် ❤️
မနက်စာအတွက်ဆို ကန်တော်ကြီးက signature မှာ
ဒင်ဆမ်းစားမယ် ... 🥟🥟🥟
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး မနက်စာကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားမယ်ဆို
Mary’s coffee shop လေးဆိုရင်ကော ??
Social Media ခေတ်ကြီးမှာ အမှတ်တရဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားဖို့ကလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ Mary’s မှာဆို ဓါတ်ဖမ်းဖို့လည်း OK တယ် 📸
ရုံးဆင်းချိန် dinner 🍽 ချိန်လေးမှာ Date မယ်ဆိုရင်တော့ နေခြည်သဘောကျနေတဲ့နေရာလေးရှိတယ်
ဟိုရက်က birthday party လုပ်တဲ့ Seeds မှာပေါ့
ညစာလေးစားရင်း ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန်လေးဖြတ်သန်းမယ်ဆိုလည်း ရတာဘဲ
ဝိုင်လေးသောက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ညအလှကိုလည်းခံစားရင်း ဖြတ်သန်းချင်တယ်ဆိုရင် ဗဟန်း၊ ဦးချစ်မောင်လမ်းကHotel Lexus’s Rooftop မှာရှိတဲ့
Shel’s Bisto လေးမှာပေါ့။ 🥂
အိမ်မှာဘဲ ရုပ်ရှင်လေးကြည့်ပြီး ဖြတ်သန်းလို့ရတယ်လေ။ အိမ်ထောင်ပြုပြီးသွားရင်လည်း ချစ်သူကို ရိုမန့်တစ်တွေဖန်တီးပေးဖို့ကို မမေ့ပါနဲ့ 🥰🥰🥰
နေခြည် Valentine Night မှာကြည့်ဖို့ ရုပ်ရှင်လေးတွေလည်း recommend ပေးလိုက်ပါတယ်
ဟောင်းပေမဲ့ နေခြည့်ရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့
The Note Book 🎞
Me Before You 🎞
Love Simon 🎞
Valentine’s Day 🎞
ကဲ ဘယ်လောက်တောင် ပြီးပြည့်စုံလိုက်မလဲ
ဒါကြောင့် နေခြည်သဘောကျတဲ့အချစ်သီချင်းလေးတွေကိုလည်း ရေးပေးလိုက်ပါတယ် 🎵🎶
Next to you - Chris Brown (ft. Justin Bieber)